12/14/13 ~ Myanmar Forward
ကင်ဂျုံအွန်၏ ဦးလေးကို သစ္စာဖောက်မှုဖြင့် ကွပ်မျက်ခဲ့ကြောင်း မြောက်ကိုရီးယား ထုတ်ပြန်
Posted by drmyochit Saturday, December 14, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
(ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် ကိုရီးယားသတင်းအေဂျင်စီ ယွန်ဟပ်က ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ဂျန်ဆောင်သက်အား တရားရုံးသို့ ခေါ်ဆောင်လာသည့် ဓာတ်ပုံ (Photo:AFP/YONHAP))
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန်၏ သြဇာကြီးဦးလေး ဂျန်ဆောင်သက်သည် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် ကို ဖြုတ်ချအာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းသော နိုင်ငံတော် သစ္စာဖောက်သူ ဖြစ်သည့်အတွက် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ကွပ်မျက်ခဲ့ကြောင်း မြောက်ကိုရီးယား နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာ (KCNA)က ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
အသက် ၆၇ နှစ်ရှိ ဂျန်ဆောင်သက်သည် ကင်ဂျုံအွန်၏ ညွှန်ကြားပြသသူ ဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး နံပါတ် ၂ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ကာလရှည်ကြာ ယူဆခံခဲ့ရာမှ ရာဇ၀တ်မှု ကျူးလွန်မှုနှင့် တန်ပြန်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ခွဲ တစ်ခုကို ထူထောင်မှုတို့အတွက် ပြီးခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရသည်။ စင်ပြိုင်အာဏာ ထူထောင်မှု၊ လာဘ်စားမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲကာ မိန်းမလိုက်စားမှုတို့ဖြင့် စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည့် ဂျန်သည် ယင်းပြစ်မှုများကို စစ်ခုံရုံးတွင် ၀န်ခံခဲ့ပြီးနောက် ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ကင်ဂျုံအီ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာတွင် ကွယ်လွန်မှုသည် ကင်ဂျုံအွန်အား စိန်ခေါ်ပြီး အာဏာရရှိမည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ် အဖြစ် ဂျန်က ရှုမြင်ခဲ့သည်ဟု KCNA က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၎င်းကို ''နိုင်ငံရှိ လူတန်းစားအားလုံးကို သစ္စာဖောက်သူ''၊ ''ခွေးတစ်ကောင်ထက် ဆိုးရွားသောသူ'' နှင့် ''စက်ဆုပ်ဖွယ်ကောင်းသော လူဖျင်းလူသွမ်း ဆန်ကုန်မြေလေး'' ဟု အစိုးရက သတ်မှတ် ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံအကြီးတန်း အရာရှိတစ်ဦး ဖြစ်သည့်အပြင် ဆွေမျိုးတော်စပ်သူ ဂျန်ကို ကင်၏ ယခုကဲ့သို့ လူသိရှင်ကြား ပုတ်ခတ်သရော်ခြင်းသည် ကင်၏အာဏာချုပ်ကိုင်မှု ခိုင်မာလာခြင်း သင်္ကေတတစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံရေး သုတေသီများက သုံးသပ်ခဲ့သည်။ ကင်သည် ပြီးခဲ့သည့် နှစ်နှစ်အတွင်း အာဏာချုပ်ကိုင်မှု အားကောင်းစေရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး သြဇာနှင့် ခြိမ်းခြောက်မှု ကြီးမားလာသော ရင်ခွင်ပိုက် နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်သူ ဂျန်ကို မလိုလားတော့ဟု တောင်ကိုရီးယားရှိ ဆီဂျောင်တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီ ပက်ဟက်ဆွန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းပုတ်ခတ်မှုများသည် အန္တရာယ်ရှိပြီး တည်ငြိမ်မှု မရှိခြင်း၏ လက္ခဏာများဟု လေ့လာသူ အချို့က ယူဆခဲ့သည်။ ဂျန်ကို ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ပြီး သေဒဏ်စီရင်ခဲ့ခြင်းက မြောက်ကိုရီးယားတွင် အရာရာသည် ပုံမှန်မဟုတ်သည်ကို ပြသနေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အမေရိကန်နိုင်ငံရေး လေ့လာသူအဖွဲ့မှ ဆန်းစစ်လေ့လာသူ တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဂျန်အား ကွပ်မျက်မှုသည် မြောက်ကိုရီးယား အစိုးရ၏ အစွန်းရောက်သော ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု ဥပမာတစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန လက်ထောက် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် မာရီဟာ့ဖ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ကင်ဂျုံအွန်သည် သြဂုတ်လနှောင်းပိုင်းက ရည်းစားဟောင်း အဆိုတော်တစ်ဦးနှင့် အခြား လူတစ်ဒါဇင်ခန့်ကို ကွပ်မျက်ရေး တပ်ဖွဲ့ဖြင့် ကွပ်မျက်ခဲ့ကြောင်း တောင်ကိုရီးယား သတင်းစာ Chosun Ilbo က ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဟွန်ဆိုဝူးဆိုသူ အဆိုတော်နှင့် အူဟာဆူ သံစုံတီးဝိုင်း အဖွဲ့ဝင်များသည် သြဂုတ် ၁၇ ရက်က ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်း တရုတ်ရှိ အမည်မဖော်လိုသော သတင်းရင်းမြစ်များက ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ယင်းသတင်းစာက ဆိုသည်။
Samsung Galaxy s3 မှာ no service or emergency call error ဖြေရှင်းနည်း
Posted by drmyochit Saturday, December 14, 2013, under နည်းလမ်းများ | No comments
Samsung galaxy s3 မှာ
No service or Emergency Calls ဆိုတဲ့ error ဖြစ်တဲ့အခါ (firmware ကြောင့်လဲ မဟုတ် Hardware ကြောင့်လဲ့မဟုတ် လိုင်းကဒ်ကလဲမဟုတ်) အဲ့လိုကြုံခဲ့မယ်ဆို၇င် ဖြေ၇ှင်းနည်း
only Galaxy S3
အောက်ပါ apk ကိုဒေါင်းလိုက်ပါ်
ဖုန်းက root access ၇ှိ၇ပါ့မယ်
busybox install ထား၇ပါ့မယ်
Go to> setting> Security> check unknow sources လုပ်ပေး
ပြီး apk ကို install လုပ်ပါ
ပြီး၇င် အဲ့ဒီapk ကိုဖွင့်ပါ
V[0,5] patch ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါ ခဏစောင့်ပါ Reboot ကျသွားပြီးပြန်တက်လာ၇င်နက်ဝက်မိသွားပါလိမ်မယ်
Huawei G 610-U00 Safe Mode Error ကိုဖြေရှင်းနည်း
Posted by drmyochit Saturday, December 14, 2013, under နည်းပညာ | 1 comment
Huawei G 610-U00 Safe Mode Error ကို ကျွန်တော် ဖြည်နိုင်ခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ပြောပြချင်လို့ပါဗျာ သိပြီးတဲ့အကိုတွေ ကျော်ဖတ်လိုက်ပါနော် …မသိသေးတဲ့ အကို ညီများအတွက်ပါ …ကိုယ်တွေ ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ နည်းလေးမို့လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ
၁ ဒီ error က Vol – ကြောင့်ဖြစ်တာပါ …..နောက်ဆုံး ဖန်းဝဲ ပြန်တင်တာတောင် Safe Mode နဲ့ ပဲ ပြန်တက်လာပါတယ် ….အဲဒါနဲ့ ဟိုမေးဒီမေးဟိုကြည့်ဒီကြည့် နဲ့ပဲ Safe Mode ပျောက်သွားတာပါ
pw & vol – တွဲနှိပ်ရင် new ..safemode old…risk ဆိုပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာပါ
ဆိုတော့ ၁ ဘတ်ထွီဖြုတ်လိုက်ပါ
၂ ပြန်တပ်ပြီးပါဝါဖွင့် W 3G ဆိုပေါ်လာခဲ့ရင် vol – လေးဖိထားလိုက်ပါ …..နောက်ဆုံးlock screen ရောက်သွားခဲ့ရင် safe mode ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာပါ …..
ကျနော်စမ်းသပ်အောင်မြင် ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် သေခြာသလောက်ပါပဲဗျာ။
ပို့စ်ရေးသားသူ- ကိုလင်းသူရ (Myanmar Mobile Phone Hardware Solution)
Viber မှပိုက်ဆံပေးဝယ်ရသော sticker တွေကို hack ယူနည်း
Viber မှပိုက်ဆံပေးဝယ်ရသော sticker များကို vpn unlimited apk နဲ့ freedom apk သုံးပြီး sticker များကိုယူရအောင်။ Root ရှိဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။
ပထမဆုံး- vpn လေးကို install လုပ်ပါ။
♣Vpn Unlimited Apk အားဒေါင်းယူရန်♣
ပြီးရင်ဖွင့်ပေးပါ။app ရဲ့ အပေါ်ထောင့်နားလေးမှာ starting ဆိုပြီး auto ချိတ်ဆက်နေပါလိမ်မယ်။ချိတ်လို့ရသွားရင် noti မှာ icon ပုံလေးပေါ်လာရင်ချိတ်လို့ရသွားပါပြီ။ပြီးရင် setting >> app manager ထဲက playstore ကို force stop နဲ့ data clear လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ playstore ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ။ access တောင်းရင် access လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဒုတိယ-freedom လေးကို install လုပ်ပါ။
♣freedom apk အားဒေါင်းယူရန်♣
root access တောင်းရင် access ပေးလိုက်ပါ။အကုန်ပြီးရင်တော့ viber ထဲဝင်ပြီး sticker downloaded ဆွဲလို့ရပါပြီ။ downloaded ဆွဲရင် box တခုကျလာပါလိမ်မယ် ok နှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်နောက် box တခုက buy ကိုနှိပ်ပါ။ပြီးရင်တော့ရင် downloaded ကိုနှိပ်ပီး downloaded လုပ်လို့ရပါပြီ။
credit to:ကိုဇော်သွင် နည်းပညာ
MPT Service v.1.1 APK (Offline Service) For Android Only
Posted by drmyochit Saturday, December 14, 2013, under နည်းပညာ | No comments
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Application လေးကတော့ MPT ရဲ့ Service ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ Android User တိုင်းရှိ ထားသင့် တဲ့ Application လေးတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ ပြည်ပမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသုံးမတည့် ပါဘူးနော်။ မြန်မာနိုင်ငံသုံးဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ App ကနေ
GSM Internet လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း
GSM Internet Setting ချိန်နည်းပါရှိခြင်း
GSM Call Waiting Service လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း
GSM Call Forward Service လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း
GSM Miss Call Altert Service လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း
GSM Voice Mail လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း
App အတွင်းမြန်မာလိုအညွန်းများပါဝင်ခြင်းကြောင့်အဆင်ပြေပြေ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။
Credit to : Phyo Chan ( MMSD )
မလေးရှားက မြန်မာဟိုတယ်ဝန်ထမ်းရဲ့ ရိုးသားမှု ဂုဏ်ပြုခံရ
Posted by drmyochit Saturday, December 14, 2013, under ပြည်ပရောက်မြန်မာသတင်းများ | No comments
မြန်မာအလုပ်သမား Mr. Khua Khun Thang ကို ဟိုတယ်အရာထမ်းက ဂုဏ်ပြုနေပုံ၊ ဓာတ်ပုံ- The New Paper
တချို့လူတွေအနေနဲ့ ကောက်ရတဲ့ အဘိုးတန်ပစ္စည်းမျိုးဆိုရင် ပြန်မပေးပဲ ယူထားလိုက်ကြမယ် ထင်ပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် မလက္ကာက ဟိုတယ်တခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာ သန့်ရှင်းရေး အလုပ်သမားကတော့ ဒီလိုမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အလွန်ရိုးသား ပါတယ်။
တန်ဘိုးကြီး စိန်လက်စွပ်ကို တွေ့ခဲ့ရပေမယ့် ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတဦး အကြောင်း ဒီကနေ့ မလေးရှား နေ့စဉ် သတင်းစာတခုမှာ အပြည့်အစုံ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာအလုပ်သမား Mr. Khua Kung Thang က မလေးရှားနိုင်ငံက Hatten Hotel Malacca မှာ သန့်ရှင်းရေး အလုပ်သမား အဖြစ် အလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်ကာ စင်ကာပူ အမျိုး သမီးတဦးက ဟိုတယ်ခန်း တခုမှာ တည်းခိုပြီး ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၈၆၀၀ ဝန်းကျင် တန်ဘိုးရှိတဲ့ စိန်လက်စွပ် တကွင်းကို ကောက်ရခဲ့ပါတယ်။
အမည်မဖော်ပြထားတဲ့ စင်ကာပူ အမျိုးသမီးက မလေးရှား နိုင်ငံ Jalan Merdeka အရပ်က Hatten Hotel Malacca ဟိုတယ် မှာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ကိစ္စနဲ့ ၃ ရက်တာ တည်းခိုသွားခဲ့တာပါ။
အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက သန့်ရှင်းရေး အလုပ်သမား Mr. Khua ဟာ ဟိုတယ်အခန်း အတွင်း သန့်ရှင်းရေး ဝင်လုပ်တဲ့အခါမှာ ကုလားထိုင်တလုံး အောက်က အဲဒီ တန်ဘိုးကြီး စိန် လက်စွပ် ကို တွေ့ ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ သူက ဟိုတယ်က သူ့အထက်အရာရှိကနေတဆင့် စင်ကာပူအမျိုးသမီး နေထိုင်ခဲ့ပြီး ပြန်ထွက်သွားတဲ့ အခန်းက စိန် လက်စွပ်ကောက်ရတဲ့အကြောင်း အသိပေး အပ်နှံခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ သွားပြီး အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ ရွှေမြန်မာတွေရဲ့ ဂုဏ်ကို သူ့ရဲ့ ရိုးသားမှုနဲ့ အရောင်ပြောင် ထွန်းအောင် လုပ်ပြ လိုက်တာ တကယ် ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းပါတယ်။
ဒါဟာ အမှန်အကန် မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by drmyochit Saturday, December 14, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
ဒီဇယ်ဆီတွဲ ယာဉ်ပေါ်တက် ဆီခပ်ယူသော ရွာသူရွာသား ၂၅၀ ကိုအမှုဖွင့်ရန်ကုန်မြစ် တွင်းရှိ ဆိပ်ကမ်း မြို့နယ် သက်ကယ်ကွင်း ကျေးရွာ အနီးတွင် ရွှေဗျိုင်းဖြူ ကုမ္ပဏီပိုင် ဒီဇယ်တွဲ ယာဉ်ပေါ်သို့ ရွာသူရွာသား ၂၅၀ ခန့် တက်ရောက်ကာ ဒီဇယ်များ ခပ်ယူမှုကို ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူနိုင်ရန် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း အဆိုပါ ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ခံ မန်နေဂျာ ဦးသန်းထွေးက ပြောကြားသည်။
သီလဝါဆိပ်ကမ်း အရှေ့ဘက်ရှိ ရေလယ်တွင် ကျောက်ချ ရပ်နားထားသော စင်ကာပူ ကုမ္ပဏီပိုင် သင်္ဘောပေါ်မှ ဒီဇယ် ဂါလန် သုံးသိန်း တစ်သောင်းကို ကမ်းခြေသို့ သယ်ဆောင်လာသည့် ရွှေဗျိုင်းဖြူ ကုမ္ပဏီပိုင် ဒီဇယ်တွဲယာဉ်မှာ ဦးဆိုက်သွားသဖြင့် နီးစပ်ရာ ကမ်းစပ်ဖြစ်သော သက်ကယ်ကွင်း ကျေးရွာ အနီးသို့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီခန့်က ကမ်းကပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းသို့ ကမ်းကပ်ထားစဉ် အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ ကျေးရွာများမှ ရွာသူရွာသားများက ဆီတွဲယာဉ်ပေါ် တက်ကာ ချိတ်ပိတ်ထားသော ဆီထည့်ပေါက် များကို ဖွင့်၍ အုပ်စုလိုက် ဒီဇယ်များ ခတ်ယူခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ကုမ္ပဏီမှ ဒါရိုက်တာ ကိုစိုးသီဟက ရှင်းပြသည်။ “မြစ်ထဲကို ဒီဇယ်တွေကျလို့ အခြားသူတွေ ခပ်ယူတယ်ဆိုရင် အမှုမဖွင့်ပါဘူး၊ ခုဟာက ဒီဇယ်တွဲပေါ် အုပ်စုလိုက် တက်ခပ်လို့သာ အမှုဖွင့်တာပါ” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
ဒီဇယ်တွဲယာဉ် ကမ်းကပ် ထားချိန်တွင် လှေလေးစီးဖြင့် ရေလုပ်သား ရှစ်ဦးခန့် ရောက်ရှိလာပြီး ဘာကြောင့် ကပ်သည်ကို လာရောက် မေးမြန်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းနောက် ရေလုပ်သားများ ပြန်သွားပြီး မိနစ် ၂၀ ခန့် အကြာတွင် လှေအစီး ၁၀၀ ကျော်ဖြင့် လူ ၂၅၀ ကျော် ရောက်လာပြီး ဒီဇယ်တွဲယာဉ် ပေါ်တက်ကာ ဒီဇယ်များ ခပ်ယူခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ ဆီခပ်ယူနေချိန်တွင် ကုမ္ပဏီဘက်မှ တာဝန်ရှိသူများက မခပ်ယူရန် တားမြစ်သော်လည်း ယင်းရွာသားများက ဂါလန်ပုံးများဖြင့် အလုအယက် ခပ်ယူကာ လှေများဖြင့် သယ်ယူသွားကြောင်း အဆိုပါ ဆီတွဲယာဉ်ပေါ် လိုက်ပါလာသူ အထွေထွေ လုပ်သား ကိုပိုင်လေးက ပြောကြားသည်။
“ကျွန်တော်တို့က မယူကြဖို့ တားပေမယ့် ရေထဲမြုပ်ပြီး ဆုံးရှုံးမယ့် အတူတူ ငါတို့ယူတာ အကျိုးရှိတယ် ဆိုပြီး အတင်းခပ်တော့တာပဲ၊ လူအုပ်က အရမ်းများတော့ မပြောရဲဘူး” ဟု ၎င်းက ရှင်းပြသည်။ သီလဝါ ဆိပ်ကမ်းတွင် စက်သုံးဆီ တင်ဆောင်လာသော နိုင်ငံခြား သင်္ဘောများ ကပ်ချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့တော်တွင်းသို့ ဆီသယ်ဆောင်ရန် ပြည်တွင်း ဆီသယ်ယူရေး လုပ်ငန်းများက သုံးရက်အတွင်း လုပ်ဆောင် ပေးရကြောင်း၊ ဆီသယ်ဆောင်ရာတွင် အခက်အခဲ တစ်ခုကြောင့် ဆီတွဲယာဉ် ကမ်းကပ်ရာတွင် စက်သုံးဆီများကို အုပ်စုလိုက် လာရောက် ယူဆောင်ခြင်းသည် လုပ်ငန်းရှင်များ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် လုံခြုံမှု မရှိကြောင်း၊ အုပ်စုလိုက် ဒီဇယ်ခပ်ယူမှုကို ထိရောက်စွာ အရေးယူပေး စေလိုကြောင်း ယင်းကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ ကိုစိုးသီဟက ပြောကြားသည်။
အုပ်စုလိုက် ဒီဇယ်ခပ်ယူ နေစဉ်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် Mobile Team အဖွဲ့ရောက်ရှိလာကာ တားမြစ်စေသော်လည်း တားမရကြောင်း၊ ယင်းနေ့ ညနေ ၄ နာရီမိနစ် သုံးဆယ်ခန့်တွင် စက်လှေဖြင့် ရောက်ရှိလာသော ဆိပ်ကမ်းရဲ တပ်ဖွဲ့ဝင်များက တားမြစ်မှသာ ဆီတွဲပေါ်မှ ရွာသူရွာသားများ ပြန်လည်ဆင်းကာ ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြောင်း ရွှေဗျိုင်းဖြူ ကုမ္ပဏီထံမှ သိရှိရသည်။ အဆိုပါ ဒီဇယ်ဆီ လာရောက် ခပ်ယူသည့် ရွာသူရွာသားများကြောင့် ဆီပေပါ ၃၀၀ ခန့်ရှိသော ဒီဇယ်ပမာဏ ဆုံးရှုံးသဖြင့် အဆိုပါ ရွာသူရွာသားများကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့က ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် မြို့မ ရဲစခန်းတွင် (ပ) ၃၄၆/၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၈၀ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးထံမှ သိရှိရသည်။
Posted by drmyochit Saturday, December 14, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
How to beaguy every girl wants အမည်နဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နဲ့ ရေးထားတဲ့ ဆောင်းပါးထဲမှ အချက်အချို့ ကို အခြေခံလို့ ဆီလျော်သလို ပြန်လည်ရေးသား မျှဝေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မိန်းကလေး တို့ လိုချင်တာဟာ အရာရာ ပြီးပြည့်စုံနေတဲ့ သူမဟုတ်ပါဘူး။ (ထင်တာပဲ :D) ယုံကြည်ချက် အပြည့်အဝနဲ့ ရိုးသားကြိုးစားနေသူများ ဖြစ် ပါတယ်။ ပြိုင်ကား မစီးနိုင်ပေမယ့် ဘတ်စ်ကားမှာ သက်ကြီး ကို နေရာပေးတာမျိုး၊ အခြားဘယ်သူတွေနဲ့ပဲ ယှဉ်ယှဉ် ရင်ကော့ ခေါင်းမော့လို့ တန်းတူ ပြောဆို ဆက်ဆံ လုပ်ကိုင်နေသူမျိုး တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဌေးမို့ကြောက်သူ၊ ဆင်းရဲသူမို့ နိမ်ချင်သူမျိုး မဟုတ်ဘူးနော်။ အားလုံးကို သတ္တိရှိရှိ ပြောဆို ရင်ဆိုင်နိုင်သူမျိုး ဖြစ် ပါတယ်။ (စပယ်ယာနဲ့တော့ ရန်မဖြစ်နဲ့ပေါ့။ ရုပ်ပေါက်တယ် :D)
ဟုတ်ပါတယ် စိတ်ရှည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Remember, she's onlyagirl တဲ့။ မိန်းကလေးကို မိန်းကလေးလို့ပဲ မြင်ပါလို့ဆိုပါတယ်။ စကားများ ချင်များမယ်။ အတင်းပြောချင်ပြောမယ်။ ပစိပစပ်နိုင်ချင် နိုင်မယ်။ ဒါကို အရေးတယူလုပ်လို့ အချက်ကျ လိုက်ပြောနေတဲ့ အမျိုးသားမျိုး၊ အချက်ကျ တုန့်ပြန်တတ်တဲ့ အမျိုသားမျိုးတို့ကို အမျိုးသမီးတို့ မကြိုက်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
Girls love compliments တဲ့။ သူတို့ကို ချီးမွမ်းတာ ကြိုက်တတ်ကြပါတယ်။ ဟုတ်သည်ရှိ၊မဟုတ်သည်ရှိ သူ့ကို ရုပ်လှတာလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စကားပြောကောင်းတာလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ချီးမွမ်းပေးလိုက်လို့ အပန်းမကြီးဘူးလေ။ ဒါဆိုရင်လည်း မိန်းကလေးက ယင်းကောင်လေးကို နှစ်သက်လာမှာပါ။
4. Try out her favourite
အကြိုက်လိုက်သူအောင် ညှိရမယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဒါကလည်း အများအားဖြင့်တော့ မှန်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်နဲ့ ကြိုက်တဲ့ အစားအစာ တူတာမျိုး၊ အရောင်ကြိုက်တူတာမျိုး၊ သီချင်းကြိုက် တူတာမျိုး တို့က ကောင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လွယ်လွယ် စဉ်းစားကြည့်တော့ တီဗီကြည့်တဲ့အခါ ချယ်နယ် တစ်ခုတည်းကိုပဲ နှစ်ယောက်အကြိုက်တူလို့ ကြည့်တာ အကောင်းဆုံးပဲလေ။ အကြိုက်တူပြီဆိုရင်လည်း မိန်းကလေးများ နှစ်သက်တယ်ဆိုတာကို ငြင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။
ဒါကတော့ အားလုံး လက်ခံမှာပါ။ မိန်းကလေးများက သူတို့ကို ပျော်အောင်၊ ရယ်နေအောင် လုပ်ပေးတတ်သူကို သဘောကျ နှစ်သက်တာ အမှန်ပါပဲ။ သို့ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူရွှင်တော်၊ လူပေါကြီးတော့ မဖြစ်မခံနဲ့ပေါ့။ လူပေါဖြစ်နေရင်လည်း အမျိုးသမီး နှစ်သက်သဘောကျဖို့ Chance နည်း ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်အောင် ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလေး ကို ပြသနိုင်ရင် ရပါပြီ။
6. Share things with her
မျှဝေပါတဲ့။ မုန့်ခေါ်ကျွေးတာမျိုး၊ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ ပစ္စည်းလေး ပေးလိုက်တာမျိုး၊ သူကြိုက်တဲ့ သီချင်းဖွင့်ပေးတာမျိုး၊ ကူး ပေးတာမျိုး၊ စာအုပ်ရှိလည်း ငှားလိုက်တာမျိုး၊ စာရှင်းပြတာမျိုး။ အဲ့လို Share လုပ်ပေးနေတာကိုက အမျိုးသမီးကို နှစ်သက်တာပါ။ (ဘဏ်စာအုပ်ကတော့ နောက်မှ Share ပေါ့. kidding)
7. Tell her things.
မိမိမှာ ရှိတဲ့ လျှုို့ ဝှက်ချက်ကိုပြောပြပါ။ လျှို့ ဝှက်ချက်ဆိုလို့ မီးခေတ်သေတ္တာ နံပါတ်တို့ ၊ APM ကဒ် Password တို့ မဟုတ်သေး ဘူးလေ။ အခြားလူတွေ မသိသေးပဲ သူမတစ်ယောက်တည်း ကိုပဲ ပေးသိ ပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ မျိုးလေးပဲ ပြောဖို့ ပါ။ ပြီးတော့ ဒါကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မသိစေချင်တဲ့ သဘောနဲ့ သူနားလည်အောင်ပြောပြရပါမယ်။ ဒါဆိုရင် မိန်းကလေးက ယင်းကောင်လေးအပေါ် ပိုယုံကြည်လာပြီး "ငါဟာ သူရင်ဖွင့်စရာလူ တစ်ယောက်ပါလား" လို့ ထင်မြင်လို့ ပျော်ကောင်းပျော်ပါလိမ့်မယ်။
8.Listen her things
မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ကို နှစ်သက်ရင် သူ့အကြောင်းတွေရင်ဖွင့်တတ်ပါတယ်။ မပြောပဲနဲ့တော့ ဇွတ်အတင်း သွားမမေးရဘူးလေ။ ဒါဆိုရင် ပိုလို့တောင် အမြင်ကပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ သူရင်ဖွင့်လာရင်လည်း ရင်ဖွင့်သမျှကို ရင်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားပါ။ ဘယ်သူမှထုတ်မပြောပါနဲ့။ အဲ့လို ထုတ်မပြော ပါဘူးဆိုတာကိုလည်း သူသိအောင် ကိုယ်က နေပြရမယ်။ စိတ်ဝင်စားပြရမယ်။ ပြန်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးပေးရမယ်။ ဒါဆို သူ့အပေါ် နားလည်ပေးနိုင်တဲ့ သူပါလား ဆိုပြီး မိန်းကလေးက ယင်းကောင်လေး အပေါ် ပိုလို့ ယုံကြည်လာစေ ပါတယ်။
အရေးအကြီးဆုံး အချက်ပါပဲ။ အထက်က ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ငါ ဒီလို သွားလုပ်လိုက်မယ်လို့ သွားမလုပ်လိုက်ပါနဲ့။ နေဝင်ပြီး နေထွက်သလို အမှန်တရားကလည်း ဖုန်းကွယ်လို့ မရဘူးလေ။ သူအထင်ကြီး ပါစေတော့ ဆိုပြီး တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက် ဟန်ဆောင်ပြီး ချည်းကပ်ရင်၊ သရုပ်ဆောင်ရင် တစ်နေ့တော့ ပေါ်မှာပဲ။ ပိုလို့တောင် အထင်သေး သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ မိန်းကလေး မဟုတ်သူများနဲ့ ပြောဆို ဆက်ဆံတဲ့အခါ Tell her things နဲ့ Try out her favourite ကို ချန်ထားပါ။ ကိုယ့်အကြောင်း ပြောပြတာတို့။ သူ့အကြိုက်လိုက်လျော တာတို့က ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဆီမှာပဲ လုပ်သင့်တာလေ။ ဒါကို မိန်းကလေး တိုင်းမှာ လိုက်လုပ်နေရင် အဲ့လူ မရိုးတော့တာ အမှန်ပဲ။ (သတိထားကြနော်)။
Posted by drmyochit Saturday, December 14, 2013, under နိုင်ငံတကာအနုပညာ | No comments
ဆယ်တန်းအမှတ်နဲ့ ကောလိပ်ဝင်ခွင့်၊ ဘာသာရပ်ရွေးချယ်မှု လူငယ်တွေအတွက် ထိခိုက်ဟု Crown ပြော
မြန်မာပြည်ပညာရေးစနစ်က ဆယ်တန်းအောင်မှတ်ကိုအခြေခံပြီး တက္ကသိုလ်နဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို ရွေးချယ်စေ တာကြောင့် မြန်မာလူငယ်တွေ ပညာသင်ကြားရေးမှာ ဝါသနာနဲ့ ဘာသာရပ် ထပ်တူ မကျဖြစ်နေ တယ်လို့ Crown Education က ဒီဇင်ဘာ ၁၃ရက်နေ့မှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ပညာရေးစနစ်ကြောင့် မြန်မာလူငယ်တွေ နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲ ဝင်ရောက်တဲ့အခါ နေရာကောင်းရဖို့ အခက်အခဲရှိတယ်လို့ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဦးအောင်ကျော်ဆန်းက ဆိုပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ Summit Park View ဟိုတယ်မှာကျင်းပတဲ့ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲမှာ ပြည်ပနိုင်ငံတွေက တက္ကသိုလ်တွေမှာ ကျောင်းတက်ချင်တဲ့ မြန်မာလူငယ်တွေ ကိုယ့်ရဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့ ကျောင်းရွေးချယ်မှုကို ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ကျောင်းသားလူငယ် ၇ဝကျော်လောက် တက်ရောက်တဲ့ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ မြန်မာ့စီးပွားရေး တံခါးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ နည်းပညာနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းတွေ ခေတ်နောက်မကျစေဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဘယ်ဘာသာရပ်တွေကို တကယ်စိတ်ပါဝင်စားမှု ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကိုလည်း ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
အနာဂတ်အတွက် ဘယ်လိုဘာသာရပ်တွေ ရွေးချယ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲကို Crown Education က ဦးဆောင်စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Video Link>>>>> Click
by Kamayut Media
Posted by drmyochit Saturday, December 14, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
ကလေးဘဝမှာ ခုန်ပေါက်ဆော့ ကစားရာက ကြီးပြင်းလာတဲ့ သမီးမိန်း ကလေးတွေဟာ တစ်ကြိမ် တစ်ခါမှ ရာသီမလာ ဖူးသေး တဲ့ အတွက် ရာသီအကြို ဝေဒနာ အကြောင်းကို ကြိုတင် သိရှိမထားရင် အထိတ်တလန့် ရင်ဆိုင် ရနိုင်ပါ တယ်။
ရာသီစတင် လာတဲ့အခါ မြင်လိုက်ရတဲ့ သွေးစ သွေး နတွေကြောင့် ဘာများဖြစ် တာလဲဆိုပြီး လန့်ဖျပ်သွားနိုင်သလို ရာသီအကြို ဝေဒနာကြောင့် ဘာများ ဖြစ်နေသလဲဆိုပြီး စိတ်ဓာတ်ကျ နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပျိုဖော် ဝင်တော့မယ့် သမီးမိန်းကလေးတွေ သိထားသင့်တဲ့ ရာသီအကြို ဝေဒနာ အကြောင်းကို ရေးသားလိုက်ရ ပါတယ်။
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ နေထိုင်ရန် တက္ကသိုလ် အသီးသီးတွင် အဆောင်များ ထားရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမများ အသင်းက အရေးပေါ် ကြေညာချက် တစ်စောင်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း ဒဂုံတက္ကသိုလ် ဆရာ၊ ဆရာမများ အသင်းမှ အတွင်းရေးမှူး ဦးဇော်မျိုးလှိုင်က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များ နေထိုင်စေသော အဆောင်များမှာ တက္ကသိုလ် ဆရာ၊ ဆရာမများ နေထိုင်လျက်ရှိသော အဆောင်များ ဖြစ်သောကြောင့် ယခင် နေထိုင်သူ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ဝန်ထမ်းများကို တာဝန်ရှိသူများက အဆောင်များမှ နှင်ထုတ်သည်ကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း၊ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ နေထိုင်ရန် အဆောင်များ ဖော်ထုတ်ခြင်းကို တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း ကန့်ကွက် ရှုတ်ချကြောင်း အဆိုပါ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရှိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ တက္ကသိုလ် ဆရာ ဆရာမများ နေထိုင်သည့် အဆောင်တွင် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများကို ထားခြင်းသည် ဆရာနှင့် ကျောင်းသားကြား ဆက်ဆံရေးကို ပျက်ပြား စေနိုင်သောကြောင့် ရေရှည်တွင် မည်သို့မျှ ကောင်းကျိုး ဖြစ်ထွန်းစေမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ ရေရှည်တွင် လိမ်လည် လှည့်ဖြားနေသော အကျင့်ဟောင်းများကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် အပြီးတိုင် စွန့်လွှတ်ချိန်တန်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အပါအဝင် အချက်ကိုးချက် ပါဝင်သော အရေးပေါ် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
“တက္ကသိုလ်က အဆောင်တွေက ကျောင်းစာသင်ခန်းနဲ့ နီးနေတော့ မိန်းကလေး အဆောင်သူတွေအတွက် အဆင်မပြေဘူး၊ အဲဒီအဆောင် နေရာတွေကလည်း အရင်က ဆရာမ၊ ဝန်ထမ်းတွေ နေခဲ့တဲ့ အဆောင်ဆိုတော့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ နေစရာမရှိလို့ ဒုက္ခရောက်နေတယ်” ဟု ဦးဇော်မျိုးလှိုင်က ပြောကြားသည်။
တက္ကသိုလ် ဆရာ၊ ဆရာမများ အသင်းကို ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက ရန်ကုန် အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်၊ ဒဂုံတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် အနောက်ပိုင်း တက္ကသိုလ်၊ မန္တလေး တက္ကသိုလ်များ (မဟာအောင်မြေမြို့နယ်)၊ စစ်တွေ တက္ကသိုလ်မှ ဆရာ၊ ဆရာမများ ပါဝင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ အသင်းထံမှ သိရှိရသည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အနေနှင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန် ပညာရေးတက္ကသိုလ်၊ စစ်ကိုင်း ပညာရေးတက္ကသိုလ်၊ မြစ်ကြီးနား တက္ကသိုလ်တို့တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို အဆောင် လက်ခံပေးမည် ဖြစ်ပြီး ကျန်တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များတွင် ပထမနှစ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို ဦးစားပေး အဆောင်ထားမည် ဖြစ်ကြောင်း နိုဝင်ဘာလက နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်။
Status Bar Mini PRO v 1.0.102 for android
Android phone/Tablet ကိုင်ဆောင်သူတွေ အတွက် မိမိတို့ဖုန်းရဲ့ Status Bar ကို မိမိကိုယ်တိုင် ပြုပြင်နိုင်မယ့် ဆော့ဝဲလ်လေး Status Bar Mini Pro ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..ဒီဆော့ဝဲလ်ကို အသုံးပြုပြီး Status Bar မှာ မိမိထားလိုရာကို ထည့်သွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်..font size, color, order, location, transparency, and layout စတာတွေကိုလည်း လိုသလို ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်မှာပါ.. Google play မှာ ၁၀ ဒေါ်လာပေးဝယ်ယူရမှာ ဖြစ်ပြီး Myanmar Mobile App Store မှာ Freedownload ရယူနိုင်ပါပြီ..
Status Bar Mini Pro ဆော့ဝဲလ် အားရယူရန်
TSF Shell အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် 12 လ12 ရက်နေ့ထွက် Update လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နာမည်ကြီး App မို့လို့သူရဲ့အသုံးဝင်ပုံတော့ တော်တော်များများသိပီးသားပါ
google play မှာ လူကြိုက်များပြီး 539 ဘတ်တန်တဲ့ application လေးဖြစ်ပါတယ်
Launcher တွေထဲမှာ ကျွန်တော်အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်
Launcher effect မှာ icon တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို စက်ဝိုင်းသဏ္ဍာန်၊လေးထောင့်သဏ္ဍာန်၊face in/fade out စသဖြင့် အမျိုးမျိုးနဲ့ သုံးသူတိုင်းအကြိုက်တွေ့ကြပါတယ် …3D စတိုင် လေးဖြစ်တာကြောင့် ကြည့်ရတာ အမြင်ဆန်းစေပါတယ် အခု ဗားရှင်းမှာ အရင်ကထက်ပိုလန်းလာတယ်
မှာလေ့လာပြီး ကြိုက်ရင် အောက်လိပ်စာမှာရယူနိုင်ပါတယ်
Floating Toucher 2.5 for android
Android phone/Tablet ကိုင်ဆောင်သူတွေ အတွက် အသုံးဝင်ဆော့ဝဲလ် Floating Toucher လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..အခုနောက်ပိုင်း ဖုန်းသူတိုင်း အသုံးပြုတာတွေ့ရပါတယ်.ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက Easy Touch လိုမျိုးပါ.ဒါပေမယ့် Easy Touch ထက်ပိုတဲ့ Features များစွာပါဝင်တာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်.. လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ Home Screen မှာ ထားသုံးနိုင်တာကြောင့် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်အလန်းလေး ပါ.. အသုံးဝင် features များကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါ..
ရယူအသုံးပြုချင်သူများအောက်ပါလင့်မှာ Download ရယူနိုင်ပါပြီ..
Floating Toucher v 2.5 ဆော့ဝဲလ် အားရယူရန်
မြန်မာ-ထိုင်း ဘောလုံးပွဲ လက်မှတ် ပြင်ပပေါက်ဈေး လေးဆခန့် မြင့်တက်
မြန်မာ-ထိုင်း ဘောလုံးပွဲ လက်မှတ် ပြင်ပပေါက်ဈေး လေးဆခန့် မြင့်တက်ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏ အာကစားကွင်း အတွင်း ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ယှဉ်ပြိုင်မည့် မြန်မာနှင့် ထိုင်းအမျိုးသား ဘောလုံးပွဲစဉ် လက်မှတ် ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်က ရောင်းချပေးသော လက်မှတ်ဈေးထက် လေးဆခန့် မြင့်တက်လျက် ရှိကြောင်း မြန်မာ-ထိုင်း ဘောလုံးပွဲစဉ် လက်မှတ် မှောင်ခိုဈေး ကွက်မှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်က သုဝဏ္ဏ အားကစားကွင်း အတွင်း ကျင်းပသည့် ဘောလုံးပွဲစဉ်တိုင်း၏ လက်မှတ်များကို ရိုးရိုးတန်း နှစ်ထောင်ကျပ်၊ အထူးတန်း လေးထောင်ကျပ်ဖြင့် ရောင်းချပေးခဲ့သော် လည်း မြန်မာအသင်းနှင့် ထိုင်းအသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပွဲစဉ်အတွက် လက်မှတ် ဝယ်ယူလိုသူ များနေသဖြင့် မှောင်ခို ဈေးကွက်တွင် ရိုးရိုးတန်း ကျပ်ရှစ်ထောင်၊ အထူးတန်း ကျပ်တစ်သောင်းခွဲအထိ မြင့်တက် သွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်မှောင်ခို ရောင်းဝယ်သူများထံမှ သိရှိရသည်။
မြန်မာနှင့် ထိုင်းအမျိုးသား ဘောလုံးအသင်းတို့၏ ပွဲစဉ်အတွက် ကျန်ရှိသည့် လက်မှတ် နှစ်သောင်းအနက် တစ်သောင်းကို တစ်စောင်လျှင် အထူးတန်း ကျပ်လေးထောင်၊ ရိုးရိုးတန်း ကျပ်နှစ်ထောင်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ သုဝဏ္ဏ၊ အောင်ဆန်း၊ ပဒုမ္မာနှင့် စလင်း အားကစားကွင်းများတွင် ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက စတင်၍ ရောင်းချပေးရာ ဝယ်ယူများပြား လွန်းသောကြောင့် လက်မှတ်ဈေး မြင့်တက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
“ကြည့်ချင်မှတော့ ရတဲ့ဆီက ဝယ်ရတာပေါ့၊ အထူးတန်းကို တစ်သောင်းခွဲ ပေးရတယ်၊ ရိုးရိုးတန်းက ရှစ်ထောင်တဲ့၊ ရိုးရိုးတန်းဆိုရင် တော်တော်များများ ဝယ်လို့ရတယ်၊ မနက်ဖြန်ဆိုရင် ဒီထက်ပို ဈေးကြီးနိုင်တယ်” ဟု မှောင်ခိုဈေးကွက်မှ လက်မှတ် ဝယ်ယူခဲ့သူ ဦးစိန်လှမောင်က ရှင်းပြသည်။ လက်မှတ် ရောင်းချချိန်ကို နံနက် ၁၀ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီအထိ သတ်မှတ် ထားသော်လည်း နံနက် ၁၁ နာရီဝန်းကျင် ကတည်းက ဆက်လက် ဝယ်ယူ၍ မရရှိတော့ကြောင်း အောင်ဆန်း အားကစားကွင်း ရှိ လက်မှတ် အရောင်းဌာနသို့ လာရောက် စောင့်ဆိုင်း ဝယ်ယူသူများက ပြောကြားသည်။
“ကျွန်တော်တို့ မနက် ၁၀ နာရီ မထိုးခင်ကတည်းက တန်းစီနေတာ၊ နာရီဝက်လောက်နေတော့ ကုန်ပြီလို့ ပြောတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာ လက်မှတ်ရသွားတဲ့ သူက ရာဂဏန်းလောက်ပဲ ရှိမယ်၊ တစ်နေရာကို လက်မှတ် နှစ်ထောင့်ငါးရာ ရတဲ့ဟာကို ဒီလူလောက်နဲ့ ကုန်သွားတယ် ဆိုတာတော့ နားမလည်ဘူး” ဟု ဒဂုံ အထက (၁) မှ နဝမတန်း ကျောင်းသားတစ်ဦးက ဆိုသည်။
အမျိုးသား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အုပ်စု (ခ) တွင် ပါဝင်သည့် မြန်မာနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘောလုံးအသင်းတို့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် သုဝဏ္ဏ လူငယ်အားကစားဝင်း၌ ယှဉ်ပြိုင် ကစားကြမည် ဖြစ်ပြီး ယင်းနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင်လည်း ကျန်ရှိသည့် လက်မှတ် တစ်သောင်းကို သုဝဏ္ဏ အားကစားကွင်းတွင်ပင် ထပ်မံရောင်းချပေးမည် ဖြစ်သည်။
Posted by drmyochit Saturday, December 14, 2013, under အားကစားသတင်း | No comments
မြန်မာလက်ရွေးစင် ဘောလုံးအသင်း ( ၂၇ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲဝင်)။
မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ ထိုင်းအသင်းနဲ့ ကစားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီး၊ အနိုင်ကစား သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာဘောလုံးအသင်း တာဝန်ရှိသူ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ အရင်ပွဲတွေထက် ပိုပြီးတော့ ကြိုးစား ကစားရမယ်လို့ လည်း ဘောလုံး ကျွမ်းကျင်သူတွေက သုံးသပ်လိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏ အားကစားကွင်းမှာ ဒီကနေ့ ကစားမယ့် မြန်မာ နဲ့ ထိုင်းတို့ရဲ့ ဘောလုံးပွဲ အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုရန်နိုင်က တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
၂၇ ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ ဘောလုံးပွဲတွေမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးပွဲလို့ဆိုရမယ့် အိမ်ရှင် မြန်မာအသင်းနဲ့ ထိုင်းအသင်းတို့ရဲ့ ပွဲကို ဒီကနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏလူငယ်လေ့ကျင့်ရေး အားကစားကွင်းမှာ ကစားကြမှာပါ။ အုပ်စု ပထမ ၂ ပွဲမှာ မြန်မာက ကမ္ဘောဒီးယားကို ၃ ဂိုး ဂိုးမရှိ၊ တီမောကို ၃ ဂိုး ၁ ဂိုး နဲ့ နိုင်ထားသလို၊ ထိုင်းကလည်း တီမောကို ၃ ဂိုး ၁ ဂိုး ၊ အင်ဒိုနီးရှားကို ၄ ဂိုး ၁ ဂိုး နဲ့ နိုင်ထားတာကြောင့် ၂ သင်းစလုံးဟာ ၂ ပွဲကစား ၂ ပွဲနိုင် ၆ မှတ် နဲ့ ရမှတ်တူနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာ နဲ့ ထိုင်းပွဲဟာ အုပ်စုမှာ အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် ပွဲတပွဲဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာကစားသမားတွေဟာ အခုချိန်မှာ နိုင်စိတ်အပြည့်ရှိနေတယ်လို့ ဗီအိုအေက ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာ မြန်မာဘောလုံးအသင်းအုပ်ချုပ်သူ ဦးစိုးမိုးကျော် က ပြောပါတယ်။
"မြန်မာအသင်းကတော့ ထိုင်းကိုအနိုင်ကစားမှာပေါ့။ အရေးကြီးတဲ့ ပွဲစဉ်လည်းဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်အိမ်ကွင်းမှာလည်း ကစားတာဖြစ်တယ်။ အနိုင်ကစားမယ်။"
မေး- ထိုင်းနဲ့ကန်မယ့်ပွဲအတွက် အသင့်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့။
" ဟုတ်တယ်။ အသင့်ပဲ။"
မေး- ဒီပွဲမှာ အသင်းမှာ ဒဏ်ရာရတဲ့သူ မပါနိုင်တဲ့သူ အနေအထားကရော ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။
" ဒဏ်ရာရတဲ့သူလည်း အဲ့ဒီ့ဒဏ်ရာတွေက သေးသေးမွှားမွှားပဲ အဲ့ဒီ့ဒဏ်ရာတွေကို အကုန်မေ့ပြီး သူတို့အကုန် ကစားကြမှာ။ ဗိုလ်လုပွဲအတွက် နှလုံးသွင်းပြီး ကစားမှာ။"
ထိုင်းအသင်းဟာ ဘောလုံးအပေးအယူ တိကျပြီး၊ ကွင်းလယ်အားကောင်းသလို၊ ရတဲ့ ဂိုးသွင်းခွင့်တွေကိုလည်း မလွတ်တမ်းအသုံးချနိုင်ပြီး ဂိုးသွင်းသေချာတဲ့ အသင်းတသင်းဖြစ်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက သုံးသပ်ကြပါတယ်။ ဆိုတော့ မြန်မာအသင်းအနေနဲ့ ထိုင်းနဲ့ ကစားတဲ့အခါမှာ ဘာတွေကို အထူးသတိထားဂရုစိုက်ဖို့လိုမလဲ။ ၀ါရင့် အားကစားဆောင်းပါးရှင် ဦးခင်မောင်ထွေး (ပျဉ်းမနား) က ပြောတာကတော့
"အဲ့ဒီ့ကြားထဲမှာ ကျနော်ပြောသလို သူတို့က တချက်ထိ ညာပေး၊ နှစ်ချက်ထိ ညာပေး၊ လူတွေကြားထဲကနေ နောက်တန်းကြားထဲကနေ ကျော်ကျော်ပြီး ချပေးတာတွေ အဲ့တာတွေ ပေးတာကောင်းတယ်။ အဲ့တာကိုဖျက်နိုင်မှ ကျနော်တို့က နည်းနည်း အခွင့်အရေးသာမယ်ပေါ့နော်။"
အုပ်စု B မှာ ထိုင်းက အင်ဒိုနီးရှားကို အနိုင်ရလိုက်တဲ့အတွက် ၊ မြန်မာအသင်း နဲ့ ထိုင်းနဲ့ ပွဲရလဒ်ဟာ အုပ်စု B မှာ ဘယ်အသင်း အုပ်စု ပထမနေရာ ရမယ်ဆိုတာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့်ပွဲလိုလည်း ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းအသင်းနဲ့ ကစားမယ့် မြန်မာအသင်းရဲ့ အလားအလာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးခင်မောင်ထွေး သုံးသပ်တာကတော့ -
" မြန်မာအသင်းက ပြီးခဲ့တဲ့ ကစားတဲ့ နှစ်ပွဲဆိုရင်တော့ တော်တော်လေး ကြိူးစားပမ်းစား၊ ကစားရမှာပဲဗျ။ ထိုင်းကလည်း ကျနော်တို့ကို နိုင်လိုက်ရင် အကြိုဗိုလ်လုပွဲ တက်ဖို့ သေချာသွားတဲ့ အနေအထား ရှိတယ်လေ။ နောက်ဆုံးပွဲက သူက ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ကစားရမှာ။ သူတို့က ကျနော်တို့ကို အနိုင်ကစားမှာ၊ ယုံမှားသံသယမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ကြည့်တဲ့ပရိတ်သတ်ရော၊ ကိုယ့်မြေပေါ်မှာရော၊ နောက်ပြီး တသင်းနဲ့တသင်းက ပြောပလောက်အောင် ကွာခြားတာ မရှိတော့ မြန်မာအသင်းက အနိုင်ကစားဖို့တော့ လိုတယ်။ မတော်တဆ ခြေချော် လက်ချော် ရှုံးခဲ့ရင် အင်ဒိုနီးရှားကို ကစားဖို့ခက်မယ်။ အင်ဒိုနီးရှားကလည်း ကျနော်တို့ကို နိုင်ခဲ့ရင် ဗိုလ်လုပွဲတက်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်။ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ပွဲကတော့ ကျနော်ပြောရဲပါတယ်။ မြန်မာ အသင်းနိုင်ဖို့များပါတယ်။ ထိုင်းနဲ့ကတော့ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်း၊ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပဲ၊ အမှားများတဲ့အသင်း ရှုံးမယ်။ အမှားနည်းတဲ့အသင်းနိုင်မယ်။ ပြောလို့မရဘူး။ အင်ဒိုနီးရှား ကို သေချာပေါက်ပြော လို့ရတယ်။ ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ကစားတဲ့ပွဲရော ကျနော်တို့ မြန်မာလက်ရွေးစင်အသင်းကို နိုင်နိုင်တဲ့ အဆင့်မရှိဘူး ကျနော်တော့ သုံးသပ်မိတယ်။"
မေး- ဦးခင်မောင်ထွေးက ထိုင်းနဲ့ပွဲကို ဘယ်လိုထင်လဲ။
"မြန်မာအသင်းက နည်းနည်းလေး တသင်းလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ အင်တိုက် အားတိုက် ကစားရင် အနိုင်ရဖို့များပါတယ်။"
လာမယ့် ၁၆ ရက်နေ့မှာတော့ မြန်မာအသင်းဟာ အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်နဲ့ အင်ဒိုနီးရှားအသင်းနဲ့ ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သောကြာနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ အုပ်စု A ပွဲစဉ်မှာတော့ မလေးရှားအသင်းက လာအိုအသင်းကို ၄ ဂိုး ၁ ဂိုး နဲ့ အနိုင်ရသွားပြီး၊ စင်ကာပူအသင်းက ဘရူနိုင်းကို ၂ ဂိုး ဂိုးမရှိ နဲ့ အနိုင်ရသွားပါတယ်။
ကင်ဂျုံအွန်၏ ဦးလေးကို သစ္စာဖောက်မှုဖြင့် ကွပ်မျက်ခဲ...
Samsung Galaxy s3 မှာ no service or emergency call...
MPT Service v.1.1 APK (Offline Service) For Androi...
ဆယ်တန်းအမှတ်နဲ့ ကောလိပ်ဝင်ခွင့်၊ ဘာသာရပ်ရွေးချယ်မှု...
အီရန်မှာ ပျောက်နေတဲ့ အမေရိကန် CIA အတွက် ထောက်လှမ်း...